နားခိုရာ: Google Reader နဲ့ ကျွန်တော်
Posted by little moon at 8:00 AM
ညီမလည်း reader ကနေဖတ်နေတာ အတော်အဆင်ပြေပါတယ်။ ဘလော့တွေကို လိုက်မှတ်ထားဖို့ မလိုတော့ဘူး။ တနေ့တနေ့ ဖတ်စာရာတွေများလို့ လိုက်ဖတ်နေတာနဲ့ ဘလော့တွေကို လိုက်မနှုတ်ဆက်နိုင် ဖြစ်ကုန်ရော။ :D မြန်မာပြည်အတွင်းကလူတွေပါ ကျော်စရာမလိုဘဲ ဖတ်လို့ရတယ်ဆိုတော့ အတော်အဆင်ပြေတာဘဲ။
I see about 10 posts by one blog in my reader.I want to see2posts only look like ur reader. How to do? Pls explain me , thanks
2 Post ကျန်အောင် တမင်လုပ်ထားတာတော့ မဟုတ်ဘူးဗျ။ ပုံထဲမှာ Thinker ရဲ့ဘလော့က ကျွန်တော်မဖတ်ရသေးတာ 4ခုရှိတယ်လေ။
တစ်ခုတော့ရှိတယ် အခု Google Desktop နောက်ဆုံး version မှာပါတဲ့ RSS Feed နဲ့ဆိုရင်တော့ ဘလော့တစ်ခုကို ၁ခု သို့မဟုတ် ၂ခု သာကြည့်ချင်တယ်လို့ လုပ်ထားလို့ရတယ်။ နောက်ဆုံးနှစ်ခုလာပေါ်နေမှာပေါ့။
Thanks for ur reply, now I understand.